Maitiro ekubvunza ku Enterprise Chamber | Law & More B.V.
Blog » Maitiro ekubvunza ku Enterprise Chamber
Maitiro ekubvunza ku Enterprise Chamber
Kana kukakavadzana kwakamuka mukati mekambani yako isingakwanise kugadziriswa mukati, maitiro pamberi peI Enterprise Chamber inogona kunge iri nzira yakakodzera yekugadzirisa. Maitiro akadaro anonzi ongororo yekuongorora. Mune maitiro aya, Enterprise Chamber inobvunzwa kuti iongorore mutemo uye maitiro ezvematongerwo enyika. Chinyorwa ichi chichataura muchidimbu maitiro eongororo uye zvaunogona kutarisira kubva pairi.
Kugamuchirwa mune yekuongorora maitiro
Chikumbiro chekuongorora hachigone kuendeswa nemunhu wese. Chido chemunyoreri chinofanirwa kunge chakaringana kutsigira kupinda munzira yekubvunza uye nekudaro kupindira kweiyo Enterprise Chamber. Ndokusaka avo vakapiwa mvumo yekuzviita nezvinodiwa zvinodiwa zvakanyorwa zvakazara mumutemo:
Vashandi uye vadzidzisi vematikiti eNV. uye BV Mutemo unosiyanisa pakati peNV neBV nemubhadharo unokwana € 22.5 miriyoni kana kudarika. Mune yaimboitika nyaya ivo vagovani uye vatambi vanobata 10% yemari yakapihwa. Panyaya yeNV neBV's ine yakakwira yakapihwa capital, chikumbaridzo che1% yemari yakapihwa chinoshanda, kana kana masheya uye mareti ekuchengetwa kwezvikamu akabvumidzwa kumusika wakarongedzwa, mutengo wepasi mutengo we € 20 mamirioni. Chikumbaridzo chepasi chinogona zvakare kuiswa muzvinyorwa zvesangano.
The zviri pamutemo sangano pachezvayo, kuburikidza nebhodhi revatungamiriri kana bhodhi revatariri, kana iyo trustee mukubhuroka kwesangano repamutemo.
Nhengo dzesangano, yemubatanidzwa kana yekudyidzana nzanga kana vakamiririra dzinosvika gumi muzana yenhengo kana avo vane kodzero yekuvhota pamusangano mukuru. Izvi zvinoenderana nevanhu vanosvika mazana matatu.
Masangano evashandi, kana nhengo dzesangano dzichibata mukuita uye mubatanidzwa wave nekwaniso yepamutemo izere kweanopfuura makore maviri.
Mamwe masimba echibvumirano kana epamutemo. Semuenzaniso, kanzuru yemabasa.
Izvo zvakakosha kuti munhu ane mvumo yekumisa kubvunza atanga ataura zvaari kupokana nehurongwa uye mafambiro ezvinhu mukambani inozivikanwa nekambani yekutungamira uye nedare revatariri. Kana izvi zvisati zvaitwa, iyo Enterprise Chikamu haizotarise chikumbiro chekubvunza. Vaya vanobatanidzwa mukati mekambani vanofanirwa kutanga vawana mukana wekupindura zvinopesana nzira isati yatanga.
Maitiro acho: matanho maviri
Maitiro acho anotanga nekutumirwa kwechikumbiro uye mukana wemapato anobatanidzwa mukambani (semuenzaniso, vagovana uye bhodhi manejimendi) kuti vapindure. Enterprise Chamber ichapa chikumbiro kana zvinodiwa nemutemo zvasangana uye zvinoita sekunge pane 'zvikonzero zvine musoro zvekusahadzika nemutemo wakakodzera'. Mushure meizvi, zvikamu zviviri zvemaitiro ekubvunza zvichatanga. Muchikamu chekutanga, mutemo uye maitiro ezviitiko mukati mekambani anoongororwa. Uku kuferefetwa kunoitwa nemunhu mumwe kana vanopfuura vanogadzwa neInstitute Division. Iyo kambani, manejimendi ayo ebhodhi, nhengo dzevatariri vemabhodhi uye (vekare) vashandi vanofanirwa kushandira pamwe nekupa mukana kune iyo yese manejimendi. Mari dzekuferefeta dzinozotakurwa nekambani (kana iye anenge achinyorera kana kambani isingakwanise kuitakura). Zvichienderana nezvakabuda mukuferefetwa, izvi zvinodhura zvinogona kutorwa kubva kune anenge achinyorera kana bhodhi manejimendi. Pahwaro hwerondedzero yekuferefetwa, iyo Enterprise Chikamu inogona kusimbisa muchikamu chechipiri kuti kune hutongi husina kunaka. Muchiitiko ichocho, iyo Enterprise Chikamu inogona kutora akati wandei matanho anosvika kure.
Munguva yekuita uye (kunyangwe danho rekutanga rekuferefeta risati ratanga) Enterprise Chamber inogona, pakukumbira kwemunhu ane mvumo yekubvunzwa, kuita zvigadziriso zvenguva pfupi. Panyaya iyi, Enterprise Chamber ine rusununguko rukuru, chero bedzi kupihwa kwacho kuchiruramiswa nemamiriro esangano repamutemo kana mukuferefetwa. Kana hutongi husina kumira zvakanaka hwakagadzwa, Enterprise Chamber inogona kutora matanho akasimba. Izvi zvinoiswa pasi nemutemo uye zvakaganhurirwa ku:
kumiswa kana kubviswa kwechisarudzo chevatungamiriri vanogadzirisa, vatariri vevatariri, musangano mukuru kana chero rimwe sangano repamutemo;
kumiswa kana kudzingwa kwemumwe kana vanopfuura maneja kana maneja manejimendi;
kusarudzwa kwenguva pfupi kweumwe kana vanopfuura maneja kana maneja manejimendi;
kutsauka kwenguva pfupi kubva pane izvo zvinyorwa zvesangano sekuratidzwa neImabhizimusi Chamber
kuchinjisa kwenguva pfupi yezvikamu nenzira yemanejimendi;
kuputswa kwemunhu ari pamutemo.
Kukwikwidza chete mukaseti ndiko kunogona kuiswa pamberi pechisarudzo cheiyo Enterprise Chamber. Masimba ekuita kudaro akarara neavo vakambomira pamberi peInstitute Division mune inoitika, uye zvakare nesangano repamutemo kana risina kuoneka. Iyo muganho wenguva yecassation mwedzi mitatu. Cassation haina yekufungidzira maitiro. Nekuda kweizvozvo, kurongeka kweiyo Enterprise Chikamu kunoramba kuchishanda kudzamara danho rekupokana raitwa neDare Repamusorosoro. Izvi zvinogona kureva kuti danho reDare Repamusorosoro rinogona kunonoka nekuti Enterprise Chikamu chakatopa zvirevo. Nekudaro, iyo cassation inogona kubatsira mukubata nechisimba chemaneja ebhodhi nhengo uye manejimendi board nhengo maererano nehutongi hutongi hwakagamuchirwa neE Enterprise Division.
Uri kutarisana nemakakatanwa mukambani uye urikufunga nezvekutanga nzira yekuongorora? Iyo Law & More timu ine ruzivo rwakawanda rwemutemo wemakambani. Pamwe chete newe tinogona kuongorora mamiriro acho ezvinhu uye nemikana. Pamusoro peiyi ongororo, tinogona kukuraira iwe pane anotevera anotevera matanho. Isu tichavewo vanofara kukupa iwe nezano uye nerubatsiro panguva ipi neipi yekutongwa (kuInstitute Division).
Previous Post Kudzingwa panguva yekuedzwa